China Renault gam akporo Car Dvd, Renault gam akporo 4.4 Car Dvd, Renault gam akporo 5.1 Car Dvd emeputa
Nkọwa:Renault gam akporo Car Dvd,Renault gam akporo 4.4 Car Dvd,Renault gam akporo 5.1 Dvd Car,Renault gam akporo 6.0.1 Car Dvd,,
Home > Ngwaahịa > Renault gam akporo Car Dvd
Ngwaahịa nke Renault gam akporo Car Dvd , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Renault gam akporo Car Dvd , Renault gam akporo 4.4 Car Dvd suppliers / factory, wholesale high-quality products of Renault gam akporo 5.1 Dvd Car R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
Ọdụ ụgbọ oloko nke Octa core nke na-ejide ihe  Kpọtụrụ ugbu a
Egwuregwu vidiyo dvd gam akporo 9.0 maka Duster  Kpọtụrụ ugbu a
Weghara ngwa agha android nke 2016  Kpọtụrụ ugbu a
Kadjar 2016 car dvd player ihuenyo mmetụ aka  Kpọtụrụ ugbu a
Onye ọkpụkpọ ụgbọ ala Sandero Duster stereo dvd  Kpọtụrụ ugbu a
Weghara MT player ụgbọ ala multimita dvd abụọ  Kpọtụrụ ugbu a
Renault gam akporo Car DVD maka Duster 2012-2013  Kpọtụrụ ugbu a
Android Autoradio maka Megane III Fluence 2009-2016  Kpọtụrụ ugbu a
Multimedia bilstereo nke Android maka Megane II 2004-2009  Kpọtụrụ ugbu a
Multimedia bilstereo nke Android maka Megane 2003-2009  Kpọtụrụ ugbu a
Multimedia blọọgụ Android maka Duster 2014-2016  Kpọtụrụ ugbu a
Bilstereo Multimedia maka Duster 2014-2016 Deckless  Kpọtụrụ ugbu a
stereo ụgbọ ala maka Kadjar 2016  Kpọtụrụ ugbu a
ụgbọ ala maka L90  Kpọtụrụ ugbu a
stereo ụgbọ ala maka Duster 2015  Kpọtụrụ ugbu a
Ihe eji egwu Multimedia Player Android 8.1 maka Kadjar 2016  Kpọtụrụ ugbu a
Android 8.1 OS Multimedia Player Capture AT 2016  Kpọtụrụ ugbu a
Octa Core 32G Radio GPS Capture MT 2016  Kpọtụrụ ugbu a
Octa Core 4GB Ram Navigation maka Sandero Duster  Kpọtụrụ ugbu a
ndị egwuregwu dvd ụgbọ ala maka Clio 2017-2018  Kpọtụrụ ugbu a
Gam akporo 8.0 n’ime ihe ọkpụkpọ multimedia nke ụgbọ ala maka Insigina 2014-2015  Kpọtụrụ ugbu a
Ọdụ ụgbọ oloko nke Octa core nke na-ejide ihe
Ọdụ ụgbọ oloko nke Octa core nke na-ejide ihe 1.he hibere na 2009, shenzhen klyde elektrọnik cok., Ltd bụ ụlọ ọrụ ọkachamara na-azụ ahịa ọkachamara n'ịzụ, n'ichepụta na ire vidiyo ụgbọ ala na ngwaahịa vidiyo ụgbọ ala. Ngwaahịa anyị gụnyere...
Egwuregwu vidiyo dvd gam akporo 9.0 maka Duster
Egwuregwu vidiyo dvd gam akporo 9.0 maka Duster 1.3D Nsorouzọ: Stereo ụgbọ ala nwere ọrụ igodo ọsọ ọsọ ụwa niile nke ezigbo oke. Site na ọnọdụ dị ugbu a, ọsọ, ihe dịpụrụ adịpụ, ihe ngosipụta ala ụlọ, ngosi 3D n'okporo ụzọ, nchọta ebe na ntụgharị...
Weghara ngwa agha android nke 2016
Weghara ngwa agha android nke 2016 1, Igodo 3D: Igwe ụgbọ ala nwere njide Mgbapụta ụgbọ ala AT 2016 ụgbọ ala nke nwere ezigbo ụzọ ọrụ ntanetị zuru oke nke ziri ezi. Site na ọnọdụ dị ugbu a, ọsọ, ihe dịpụrụ adịpụ, ihe ngosipụta ala ụlọ, ngosi 3D...
Kadjar 2016 car dvd player ihuenyo mmetụ aka
Kadjar 2016 car dvd player ihuenyo mmetụ aka 1. Kadjar 2016 car dvd player metụrụ ihuenyo - ihubere aka dị iche iche siri ike: ndabere dị iche iche dị. Ahịa nwekwara ike iji foto ha dị ka ndabere. 2. Ihe atụ nke Kadịnal ụgbọ ala DVD dvd ọkpụkpọ...
Onye ọkpụkpọ ụgbọ ala Sandero Duster stereo dvd
Onye ọkpụkpọ ụgbọ ala Sandero Duster stereo dvd 1. Nkọwapụta ihe egwuregwu stereo dvd Sandero Duster dị ka ndị a: Ihuenyo HD: 1024 * 600 OS: sistemụ 9.0 gam akporo CPU: Rockchip PX5 Cortex A53, 8-core Isi Frenqency: 1.6GHz Ram: SAMSUNG 4GB DDR3 Nand...
Weghara MT player ụgbọ ala multimita dvd abụọ
Nkwakọ ngwaahịa: 3.5KGS / setị 400 * 255 * 210MM / igbe onyinye
Weghara MT player ụgbọ ala multimita dvd abụọ 1. HD ihuenyo maka ọkpụkpọ kamera MT 2016 ụgbọ ala nke ọtụtụ igwefoto dvd . Ntọala redio dị elu, ga-enweta ụda, okpokoro ahụ apụtaghị, mana ọ bụrụ na mmata ahụ erughị ala, ọ nwere ike kpachara anya...
Renault gam akporo Car DVD maka Duster 2012-2013
Renault gam akporo Car DVD maka Duster 2012-2013 Renault gam akporo Car DVD maka Duster wuru na Wi-Fi na-enye ohere maka nbudata ngwa ngwa nke LTE na uzo di elu na ntaneti, ebe obula I no. Igwe redio wuru na RDS nwere nyere gị ọdụ 18FM & 12AM...
Android Autoradio maka Megane III Fluence 2009-2016
Android 8.0 PX5 Android Autoradio maka Megane III Fluence 2009-2016 1. Iji smartphone gị iji mepụta Wi-Fi hotspot, ma ọ bụ zụta 4G dongle. Ọtụtụ ụzọ maka ịbanye na ịntanetị. Can nwere ike ilele ihe nkiri dị na ntanetị, chọọ na ntanetị ma ọ bụ budata...
Multimedia bilstereo nke Android maka Megane II 2004-2009
Android 8.0 PX5 Android Multimedia bilstereo maka Megane II 2004-2009 1. Jiri ohere ịntanetị dị mma karịa ịdabere na Wi-Fi. Nhọrọ dongle achọrọ. 2. Digital Audio Broadcasting na-enye gị ohere egwu mpaghara ana-akpọ mpaghara gị nke ọma yana ọwa ọhụụ....
Multimedia bilstereo nke Android maka Megane 2003-2009
Android 8.0 PX5 Android Multimedia bilstereo maka Megane 2003-2009 1. Iji smartphone gị iji mepụta Wi-Fi hotspot, ma ọ bụ zụta 4G dongle. Ọtụtụ ụzọ maka ịbanye na ịntanetị. Can nwere ike ilele ihe nkiri dị na ntanetị, chọọ na ntanetị ma ọ bụ budata...
Multimedia blọọgụ Android maka Duster 2014-2016
Android 8.0 PX5 Android Multimedia bilstereo maka Duster 2014-2016 1. gam akporo Oreo 8.0 bu ikike inyocha ya. Mmụba ya na ike yana ịrụ ọrụ na-eme ka ọ bụrụ na ọ ga-enwerịrị sistemụ arụmọrụ. 2. Mee enyo ekwentị gị na ihuenyo 8. Maka ekwentị gam...
Bilstereo Multimedia maka Duster 2014-2016 Deckless
Android 8.0 PX5 Bilstereo Multimedia maka Duster 2014-2016 Deckless 1. A gam akporo 8.0 Oreo, CPU: Octa-Core, 4GB Ram & 32GB ROM, Redio redio IC dị elu: NXP TEF6686, na ịnabata ezigbo redio. 2. Kwado nyocha nyocha Bluetooth OBD2, eji ngwa Torque...
stereo ụgbọ ala maka Kadjar 2016
Android 9.0 ụgbọ ala DVD dvd maka Renault Kadjar 2016 1.Akwadoro ya na njikwa wiilị: wụba abụ nke na-esote, dozie olu ma ọ bụ gbanye ọwa ọzọ, na-enweghị iwepụ aka gị na steering whell, na-eme ka njem gị bụrụ nke nchekwa na nke ọzọ DVD na-atọ ụtọ...
ụgbọ ala maka L90
Android 9.0 ụgbọ ala DVD dvd maka Renault L90 Android 9.0 elu Octa Core Rockchip A53 Octa core 1.5Ghz CPU ROM 32GB Ram 4GB, na-eme ka egwuregwu na-agba okirikiri mara mma na ọtụtụ ngwa ngwa na-eji ahụmịhe, dị maka ntanetị na ibudata ngwa, dị mfe...
stereo ụgbọ ala maka Duster 2015
Android 9.0 ụgbọ ala DVD dvd maka Renault Duster 2015 Android 9.0 elu Octa Core Rockchip A53 Octa core 1.5Ghz CPU ROM 32GB Ram 4GB, na-eme ka egwuregwu na-agba okirikiri mara mma na ọtụtụ ngwa ngwa na-eji ahụmịhe, dị maka ntanetị na ibudata ngwa, dị...
Ihe eji egwu Multimedia Player Android 8.1 maka Kadjar 2016
Ihe eji egwu Multimedia Player Android 8.1 maka Kadjar 2016 1, Ngagharị 3D: gam akporo 8.1 OS Multimedia Player maka Kadjar 2016 Igwe eji ụgbọ ala nwere ọrụ igodo ihu ụwa zuru oke nke ezigbo ọfụma. Site na ọnọdụ dị ugbu a, ọsọ, ihe dịpụrụ adịpụ, ihe...
Android 8.1 OS Multimedia Player Capture AT 2016 1, Naviggagharị 3D: Sitena ụgbọ ala nwere ọrụ igodo ọgbara ụwa zuru oke nke eziokwu zuru oke. Site na ọnọdụ dị ugbu a, ọsọ, ihe dịpụrụ adịpụ, ihe ngosipụta ala ụlọ, ngosi 3D n'okporo ụzọ, nchọta...
Octa Core 32G Radio GPS Capture MT 2016 1, Naviggagharị 3D: Sitena ụgbọ ala nwere ọrụ igodo ọgbara ụwa zuru oke nke eziokwu zuru oke. Octa Core 32G Radio GPS Capture MT 2016 Na ọnọdụ dị ugbu a, ọsọ, ihe dịpụrụ adịpụ, ngosipụta ụlọ ala, 3D...
Octa Core 4GB Ram Navigation maka Sandero Duster
Octa Core 4GB Ram Navigation maka Sandero Duster 1, Naviggagharị 3D: Sitena ụgbọ ala nwere ọrụ igodo ọgbara ụwa zuru oke nke eziokwu zuru oke. Site na ọnọdụ dị ugbu a, ọsọ, ihe dịpụrụ adịpụ, ihe ngosipụta ala ụlọ, ngosi 3D n'okporo ụzọ, nchọta...
ndị egwuregwu dvd ụgbọ ala maka Clio 2017-2018
Ndị egwuregwu px5 ụgbọ ala dvd maka Clio 2017-2018 Nnukwu ihe ngosi 10.1 inch HD nwere mkpebi dị elu 1024x600 na-ewetara gị oriri mmemme na-ahụ anya, yana ozi doro anya karịa ka ị na-agagharị ma ọ bụ na-atụgharị. Ọzọkwa nnukwu ngosipụta na akara...
Gam akporo 8.0 n’ime ihe ọkpụkpọ multimedia nke ụgbọ ala maka Insigina 2014-2015
Ihe ntụrụndụ ụgbọ ala gam akporo 8.0 maka Astra J 2011-2014 Abledị Model Insigina 2011-2014 Anaghị echere ogologo oge iji nweta sistemụ. Teknụzụ buut ngwa ngwa na-eme ka oge akpụkpọ ụkwụ dịkwuo elu site na 25s ruo 1s. Ugbu a oge ọ bụla ịmalitere...
China Renault gam akporo Car Dvd Ngwa
1. Renault gam akporo Car Dvd system system dabere na sistemụ 6.0.1 gam akporo, maneuverability, nchekwa, mgbanwe na njirimara ndị ọzọ, ụda ụgbọ ala na sistemụ smart.
2. You nwere ike ịnụ ụtọ egwu egwu na-enweghị eriri sitere na Renault Android 4.4 Car Dvd (1 d car dvd) na njikọ enyo.You nwere ike ijikwa ọkpụkpọ ụgbọ ala moto site na iji bọtịnụ na-achịkwa wiil ma ọ bụrụ na DVD na-enye CANBUS. Na mgbakwunye, ị nwekwara ike ịmụta ha ijikwa stereo ụgbọ ala na-enweghị CANBUS.
3. Renault gam akporo 5.1 Car Dvd, iji nweta ihe omuma kariri igosi, ihuenyo kachasi doo anya, usoro ọgụgụ isi nke na-ebu igwe iji mee ka igwe ahụ nwee mmiri mmiri ọzọ, enyo ahụ nwekwara mkpebi dị elu, nwere afọ ojuju karịa ndị Onye ọrụ dabere na ụdị ndị ọzọ, ngwa nke igodo ya dịkwa iche iche, ya na njiri pụrụ iche, dịkwa iche, tupu enwe ike ịgwa ndị ahịa aka ịzụrụ ihe iji mezuo ihe ndị ahịa chọrọ. Ọ bụ ezigbo dvd player ụgbọ ala.
Renault gam akporo Car Dvd Renault gam akporo 4.4 Car Dvd Renault gam akporo 5.1 Dvd Car Renault gam akporo 6.0.1 Car Dvd Renault gam akporo Car DVD